Iyo Yekutanga Gwaro reKugadziridza kweBing Kutsvaga - WebSetNet
Pamusoro, hazviite sekunge Bing inowana yakawanda yekutsvaga traffic, asi kana iwe ukafunga zvakare simba Yahoo, unotanga kuona kuti pamwe kugadzirisa Bing haisi yakaipa pfungwa.
Heino izvo Bing uye Yahoo yekutsvaga traffic zvinoita sekuenzaniswa neGoogle's:
Kunyangwe zvakatosanganiswa, ivo vachiri vanomiririra chidimbu cheGoogle yekutsvaga traffic, ichiri vateereri vazhinji vanofanirwa kupihwa
Kugadziridza Bing kwakasiyana zvishoma kubva pakukwiridzira kweGoogle. Iwo makambani anoshandisa akasiyana maridzi algorithms kuburitsa mhedzisiro, uye imwe neimwe inorema akasiyana zvinhu zvakasiyana.
Nekuti Google ndiyo injini huru yekutsvaga papuratifomu, mazhinji maOGO anotungamira anotarisa zvakanyanya pamatanho eGoogle. Iri gwaro rinotarisirwa kuti utange nemakwikwi, ese ari maviri Bing uye Yahoo, ayo anofambiswa neBing yekutsvaga injini.
1. Kumbira bhizinesi rako
Sezvakangoita paGoogle, unofanirwa kutora bhizinesi rako paBing neYahoo kuwedzera mibairo yekutsvaga.
Kuti uite izvi, unofanirwa shanyira Nzvimbo dzeBing dzeBhizinesi uye gadzira kana kutora muridzi pane yako bhizinesi zvinyorwa.
Yahoo yemuno bhizinesi yekutsvaga mhedzisiro inoshandisa Bing's mabhizinesi zvinyorwa panzvimbo yeayo ayo, ayo anoratidza kumusoro senge emunharaunda mabhizinesi zvinyorwa pane saiti inonzi Yext. Eric Shanfelt anoita a basa rakakura kutsanangura rakaomarara bhizinesi chimiro Yahoo inoshandisa kuendesa emuno mabhizinesi zvinyorwa pano—Kana uchifarira.
Zvakadaro, iwe unogona kunyoresa paYext, mirairo yazvo inosanganisirwa mublog raShanfelt.
Paunenge uchangonyoresa bhizinesi rako neBing, uchafanirwa kunyoresa webhusaiti yako nenzira imwecheteyo yawakaita kana uchinyoresa neGoogle, nekukodha saiti yako.
2. Ita kuti yako saiti iratidzwe
Sezvo Bing ikozvino iri pachigaro chemutyairi, Zvishandiso zveBing Webmaster kutsiva Yahoo Webmaster Zvishandiso, saka unofanirwa kuendesa saiti yako kunzvimbo imwechete chete kune ese maviri mainjini.
Heano maitiro ayo
Kutanga, iwe unofanirwa kugadzira iyo Bing yekupinda. Unogona kushandisa yako Outlook (Hotmail kana iwe wakaberekerwa mukati kubva mazuva iwayo) kana Microsoft login kuti uite izvozvo.
Ipapo, iwe unogona kushanyira iyo Bing Webhusaiti Inotumira peji uye zadza mafomu sezvakaratidzwa pamusoro apa kuti utumire webhusaiti yako.
Iwe zvakare uchada iyo URL kero yeiyo XML Sitemap Yako saiti.
Ipapo, iwe unofanirwa kuongorora muridzi nekuteedzera uye kunama kodhi yakapihwa muchikamu chakakodzera cheWordPress.
Kunge chero chinhu cheMicrosoft, Bing ine yakakura seti ye mirayiridzo yekuti ungaita sei izvi pane webhusaiti yeBing.
Paunenge uchinge uine zvese zvakanyoreswa, iwe unofanirwa kuverengerwa mukati memaminetsi mashoma uye wotanga kucherechedza traffic inopinda mukati mukupera kwegore.
Dhawunirodha gwaro rinotangisa rekutanga kugadzirisa kutsva kweBing.
3.Tag uye gadza yako saiti
Kufanana nechero imwe injini yekutsvaga, ma tag uye zvikamu zvinobatsira kuti zvirimo zvako zviwanikwe kune vateereri chaivo vekutsvaga chaiko.
WordPress inoita kuti kuwedzera matgi uye zvikamu zvive nyore kune yega yega positi uye peji rakagadzirwa. Aya mavara akakosha anotaurira ese maviri marobhoti algorithms uye vanhu vaverengi izvo zvavanotarisira kubva pambiru, zvakanyanya sezita remusoro kana musoro waizoita.
Hezvino izvo zvinongedzo zveWordPress uye Zvikamu zvinoita senge:
Dzese slug uye tsananguro yeteki zvinobatsira kuwedzera kutsanangudza chinangwa chemukati. Izvi zviratidzo zvinoshandiswa mumamepu epasi kuti uone zvikamu. Izvo zvinobatsira kune injini dzekutsvaga kuti uone zvirimo kuitira kuti kununura zvakakodzera zviitiko zveshambadziro kuburikidza nemapuratifomu avo.
Pane ese matipi eSEO uye manomano, matiki uye zvikamu ndizvo zvakakosha sezvo vachipa mufananidzo wakazara weizvo webhusaiti yako iri chaizvo. Pasina ivo, bounce mitengo inokwira uye organic yekutsvaga traffic inoderera.
4. Shandisa SEO keywords mumamiriro akakodzera
Iko kushandiswa kwemashoko akakosha kwakaratidza kukosha kwekutsvaga chinzvimbo mune injini dzekutsvaga mubhodhi, uye Bing haina kumbosiyana. Heino chati yekuti Bing neGoogle zvinofananidzana sei kana zvasvika kumazwi akakosha:
Nepo zvinhu zvakaita sekubatana kwemukati zvisina kukosha muBing pane Google, zvine chekuita, zvirevo zvemazwi zvichiri kukosha. Ichi chikonzero nei blogging iri imwe yeanonyanya kushandiswa mafomu ekushambadzira zvemukati mubhizinesi renyika nhasi.
Kumbira nyanzvi yekunyora ghostwriter kana munyori wekunyora kuti uone kuti peji rega rega rewebhusaiti yako yakanyatsogadziriswa nemashamba ekushambadzira uye imwe kopi kopi iyo inopa ruzivo rwunotsanangudza kutenderedza mazwi akakosha aunoda kutarisa.
Semuenzaniso, muindusting indasitiri, iwe ungangoda kutsanangura maficha eako emakanika mod mabhokisi kuti injini dzekutsvaga dzinzwisise kuti ndeipi traffic yekutumira nzira yako.
MaBing algorithms, senge eGoogle, tora iwo akakomberedza 5-7 mazwi ezwi rimwe nerimwe rezwi pamwe nekuwanda kwaro mukati mezviri mukati account kana uchisarudza yekutsvaga masosi. Iwe haugone kungo spam "Vape vape vape vape" kurongedza zvigadzirwa zvevape.
Iwe unofanirwa kupa "ejuice, mods, wick, matangi, uye zvimwe zvishongedzo" kuti unyatso gadzira.
5. Batanidza kune masocial network
Imwe nzira iwe yaunofanirwa kushandisa kubatsira kutyaira Bing mitsva yekutsvaga iri kusanganisa enhau midhiya mune yako SEO zano. Iko kusanganiswa kwemagariro enhau uye SEO kunoitwa zvinobudirira ne 74 muzana yemadhipatimendi ekutengesa ikozvino.
Kubatanidza nhoroondo yemagariro enhau kuWordPress, iwe unoda iyo Jetpack plugin, iyo inowanzo gadzirirwa nekumisikidza munzvimbo dzakachengetedzwa dzeWebhusaiti dzinoitirwa nevanopa saGoDaddy. Asi inogona zvakare kuiswa nemaoko. Tsvaga iyo muWordPress plugins kana uiwane pairi iyo WordPress webhusaiti.
NeJetpack yakaiswa, unogona kubatanidza ako eakaunzi media -Facebook, LinkedIn, Twitter, Tumblr, uye nezvimwe - kune yako blog kuti uone kuti yega yega positi inosimudzirwa otomatiki pane iwo masayiti ane backlinks.
Vatengesi vanogara vachipokana nezve kukosha kwemasaini munharaunda dzekutsvaga injini masosi, kunyangwe hazvo iwo ongororo dzinoverengeka dzakaratidza kuti vanoita kukanganisa zvabuda.
MuBing chaizvo, mhedzisiro inoonekwa neshamwari dzako dzepaFacebook inowanzo kuverengerwa muSERPs.
Kunyangwe kana kwete kunyatso kubatsira Bing mitsva yekutsvaga haina basa. Sei? Nekuti masocial network ane vateereri vakawanda iwe unofanirwa kuve pamberi peizvozvo.
Heanoi a kuparara kwenhamba yevashandisi venhau vanoshandisa papuratifomu yega yega yemagariro:
Kunyangwe iwe ukashandisa vezvenhau kushambadzira mukuvandudza yako yekutsvaga mhedzisiro kana kwete, kunzwisisa kuti izvi zviviri zvinhu zvekuvapo kwako pamhepo zvinopinda-mu-ruoko ndicho chakanyanya kukosha kutora.
6. Dzivisa matekiniki eheti nhema
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, kune nhema-ngowani uye chena-ngowani SEO matekinoroji. Nhema-ngowani matekiniki ndiwo maitiro ayo, nepo anogona kushanda, anotyora injini yekutsvaga mashandisiro uye anogona kuita kuti webhusaiti yako irambidzwe. White-ngowani matekiniki ese anoshanda uye anoteedzera iyo mitemo.
Usashandise nhema-ngowani SEO matekiniki paBing sezvo zvisina kukodzera njodzi.
Izvi zvinosanganisira keyword spamming, kugadzira nzvimbo dzenhema, nezvimwe. Heino chati ye nhema-ngowani SEO matekiniki ekudzivirira:
Aya matema-ngowani SEO matekiniki anganzwika senge zano rakanaka papepa, asi iwo haasi akasimba. JC Penney aive nemukurumbira kubviswa kubva kuGoogle kwenguva pfupi mushure mekuwanikwa uchishandisa matema-ngowani matekinoro ne NY Times.
Bing haina kusiyana. Kana yako saiti ikawanikwa ichishandisa nhema-ngowani SEO, pane mukana wakanaka wekuti iwe ubviswe kubva kuindekisi uye wotadza nguva yese uye nesimba raunoisa mukuvaka yako masosi.
PaBing, kubviswa uku kunonyanya kunetsa sezvo zera rewebhusaiti chinhu chepamusoro chisina kuyerwa zvakanyanya paGoogle. Saiti dzinogara kumusoro kwenguva yakareba dzinogona kuve nemhedzisiro inoratidzwa kumusoro kweBing SERPs, saka kurambidzwa kunogona kukuvadza kutsvaga kweBing.
7. Feature chikuru kugutsikana
Zvinoenderana neKutsvaga Injini Nyika, uchishandisa injini yekutsvaga ndicho chiito chekutanga chinonyanya kufarirwa nemutengi asati atenga padandemutande.
Kana iwe uchida kuverengerwa mune izvo zvabuda, iwe unozoda yakakura zvemukati kudhirowa organic yekutsvaga traffic.
Bing inonyanya kutarisa zvemukati zvemhando, izvo zvinotsanangurwa se chiremera, chinoshandiswa, uye mharidzo. Zvese zvemukati zvewebhu zvinoda kugutsa iyi trifecta kuti uve nemukana wekurwa kuti uve pamusoro weBing yekutsvaga mhedzisiro.
Zvemukati ndimambo pamhepo, uye kuti utonge pamusoro peBing, unoda zvemukati zvemukati kuti ugutse zvayakasimba zvinodiwa.
Sezvakarongwa neBuffer, iyo yakanaka blog kureba ndeye 1,600 mazwi, iyo inotora munhu wepakati anenge maminetsi manomwe kuti agaye uye aenderere mberi.
Imwe blog blog yaunogadzira yako webhusaiti inoda kuve angangoita 1,600 mazwi ehunhu zvemukati kuti uwedzere mikana yako paBing neYahoo. Izvi zvinoreva kuti inofanirwa kunyatso tsvagiridzwa, kunyatso svinurwa, uye kunyatsodudzwa, uye inoda kusanganisira yakawanda yemifananidzo mikuru.
Kana mhando yezvako zvemukati isiri yeichi chiyero, iwe uri kungo pedza nguva yako sezvo iwe usinga gone kukwira mushe paBing.
Kunyangwe ivo vasingakwanise kukwevera online traffic yeGoogle, Bing neYahoo zvakabatanidzwa ichine simba rekutsvaga sarudzo inoshandiswa nevanhu pasi rese.
Kusvika kune ino huwandu hwevanhu kunoda kutarisa pamashoko akakosha uye fomati yakafanira. Vashandisi veYahoo neBing vakawanikwa vachidzidza zvakanyanya uye vachiita mari yakawanda, saka ndiyo nzvimbo yakakwana yemabhizinesi kuti vasvike kune vateereri vavo.
Kusiyana neGoogle, traffic yeBing inonyanya kufurirwa neFacebook, mamiriro echinyorwa mazwi, uye zviitiko zvisina kushambadzira. Saiti zera ndechimwe chinhu chakakosha, saka zvinogona kutora nguva kuvaka traffic pane yekutsvaga injini.
Wakave uine budiriro yekumisikidza mawebhusaiti paBing? Ndedzipi nzira dzepamberi dzawakashandisa kuzviita?
WordPress.org vs WordPress.com: Chii chakasiyana?
← Kaviri Dhivha 4 ongororo WordPress Kugadziriswa: 101 Zvinhu Zvekuita Mushure mekuisa WordPress [DIY] →